Fomba fiasa sy fitantanana: tsy manaiky ny gaboraraka sy ny asa kitoatoa ny fanjakana | NewsMada
Tsy misy toerana ho an’ny gaboraraka izao fitondrana izao. “Ao anatin’ny fanovana isika ary manilika ny tsy mety rehetra. Tsy azo ekena ny gaboraraka fa mamotika ny firenena sy ny vahoaka“, hoy ny minisitry ny Fampianarana ambony, i Rejo-Fienena Felicité, tao Analaiva, Morondava, ny faran’ny herinandro teo. Na tsy mivantana aza, anisan’ny tafiditra ao anatin’izany ny tontolon’ny fanabeazana sy ny fampianarana ambony ary ny lafiny fitantanana ankapobeny ny firenena sy ny fomba fiasa. Anisan’ny antony nahatonga azy naneho hevitra momba izany ny fananganana sekoly ao Ankilimanjaka, Analaiva, tsy mandeha amin’ny fanorenana izany. Dimy volana ny nahavitan’ny fotodrafitrasa, saingy efa nitriatra ny valindrihana ary ahina ny hianjeran’ity EPP ity.
Mianatra eny am-bodihazo ny mpianatra
Eo koa ny valindrihana tsy araka ny nifanarahana ary ny tsy fisian’ny dabilio ho an’ireo mpianatra, na efa nifanarahana tamin’ny orinasa nanao izany aza. “Asa kitoatoa… Voatery tsy afa-mianatra ny mpianatra noho ny fanahiana ny loza… Horaisina ny fepetra rehetra ary tsy tokony ho afa-bela ireo tompon’antoka amin’izany. Harahinay ao amin’ny minisitera hatramin’ny farany io ary tsy maintsy jerena ny hanarenana izany“, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, nambaran’ny minisitra vonjimaika ny Fanabeazam-pirenena fa hatao laharam-pahamehana ny tsy hisian’ny mpianatra hianatra eny am-bodihazo, toy ny fahita amin’ny faritra sasany. Nohamafisin’ny minisitra fa anisan’ny anton-dia amin’izao fitsidihana ny aty Menabe izao ny hijery ny asa vita. Eo koa ny hihainoana ny olana samihafa eo amin’ny lafiny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ambony.
Maro ny olana setrain’ny mponina
Tsiahivina fa anisan’ny notanterahina amin’izao dian’ny minisitra aty an-toerana izao koa ny fanomezana fitaovana toy ny boky, ny “tablette” maromaro ary ny kojakojam-pianarana samihafa ireo sekoly sy ny foibe fanofanana momba ny asa ho an’ny faritra Menabe. Anisan’izany ny EPP Marofototra, ny EPP Namorana, lisea Analaiva sy ny fitokanana ny lisea ao amin’ny distrikan’i Mahabo. “Tafiditra amin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana avokoa izany“, hoy ihany izy.
Nanamarika izao dian’ny minisitra aty an-toerana izao ny fihainoana ny hetaheta sy ny olan’ny mponina. Anisan’izany ny momba ny orinasa Sucoma, Analaiva, iveloman’ny mponina ao Morondava sy ny faritra Menabe ary tokony hitondra fampandrosoana ny firenena nefa tsy mihodina intsony. Eo koa ny ranon’i Dabara, anisan’ny mbola olana ho an’ity faritra ity.